ဟင်းချက်အခြောက်ခံခြင်းနှင့် အကြော်ထုတ်လုပ်သူများ - တရုတ် ဟင်းချက်အခြောက်ခံခြင်းနှင့် အကြော်စက်ရုံ
သစ်သီးခြောက်များ ပြီးပြည့်စုံသော Line Mango Kiwi နှင့် Cherry Dehydrator Line Steel Stainless စက်များ
စျေးအသက်သာဆုံး စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သော သစ်သီးခြောက်များ ပြီးပြည့်စုံသော Line Mango Kiwi နှင့် Cherry Dehydrator Line Steel Stainless Machines ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် Bubble thawing အဝတ်လျှော်စက် 1. Conveyor belt အရှည် 4000mm၊ ပန်းကန်၏အကျယ်မှာ 800mm ဖြစ်ပြီး ပစ္စည်းမှာ stainless steel 304 2. စုစုပေါင်း power 6.95 kw 3. Dimensions 4000*1600*1400mm Selection platform 1.Length 2500mm, PU belt 800mm 2.စုစုပေါင်းပါဝါ 0.75KW ဖြစ်ပါသည်။3. အတိုင်းအတာ 2500*1100*900mm အဝတ်လျှော်စက် 1. conveyor belt ၏အရှည်မှာ 3000m...
ဖုန်စုပ်အေးမဟုတ်သော နာနတ်သီး / သံပုရာ / ငှက်ပျောသီး / ဒူးရင်း အခြောက်ခံစက်
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ်အခြေအနေ- မူရင်းနေရာ- ရှန်ဟိုင်း၊ တရုတ် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်- JUMPFRUITS မော်ဒယ်နံပါတ်- LG-20 အမျိုးအစား- လေမှုတ်စက် ဗို့အား: 380V ပါဝါ: 96kw အလေးချိန်: 10T Dimension(L*W*H): 1200*1500*15mm အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် : CE ISO Warranty: 1 Year After-sales Service Provided: Engineers available to service machinery overseas Product name: Non-fried freeze နာနတ်သီး/သံပုရာ/ငှက်ပျော/ဒူးရင်း လေဟာနယ် အခြောက်ခံစက် ပစ္စည်း: Food Grade Stainless Steel F...
သဘာဝအေးခဲထားသော ပိတောက်သီးခြောက် ထုတ်ယူသည့်စက်
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ် သက်ဆိုင်သောစက်မှုလုပ်ငန်း- အာမခံပြီးနောက် ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံ- ဝန်ဆောင်မှု- ဗီဒီယို နည်းပညာဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှု ဗီဒီယို အထွက်-စစ်ဆေးရေး- ပံ့ပိုးထားသော စက်ယန္တရားစမ်းသပ်မှု အစီရင်ခံစာ- ပံ့ပိုးထားသော စျေးကွက်ရှာဖွေရေး အမျိုးအစား- ထုတ်ကုန်အသစ် 2020 အာမခံချက်- 1 နှစ် ပင်မအစိတ်အပိုင်းများ- မော်တော်အခြေအနေ- မူလနေရာအသစ်- Shanghai, China အမှတ်တံဆိပ်အမည်- JUMPFRUITS ဗို့အား- 220V/380V ပါဝါ- 4kw အလေးချိန်- 500kg Dimension(L*W*H): 1560*450*1340mm Certificate...
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ်အခြေအနေ- မူလနေရာအသစ်- ရှန်ဟိုင်း၊ တရုတ် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်- JUMPFRUITS မော်ဒယ်နံပါတ်- JPF-DFM001 အမျိုးအစား- ရေစိုခံဗို့အား: 220V/380V ပါဝါ: 0.75kw အလေးချိန်: 400kg အတိုင်းအတာ(L*W*H): 1380*1200 *2000mm အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်- CE/ISO9001 အာမခံချက်- 1 နှစ်ရောင်းချပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်- နိုင်ငံခြားတွင် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် စက်ယန္တရားများအတွက် ရရှိနိုင်သော အင်ဂျင်နီယာများ ထုတ်ကုန်အမည်- သစ်သီးခြောက် ပြုပြင်ခြင်းစက် လျှောက်လွှာ- သစ်သီးများ၊ သရက်သီး၊ မှို၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ ...
Apricot / Mango / Cherry ခရမ်းချဉ်သီးအတွက် အခြောက်ခံစက်
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ်အခြေအနေ- မူလနေရာအသစ်- ရှန်ဟိုင်း၊ တရုတ် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်- JUMPFRUITS မော်ဒယ်နံပါတ်- JPF-HG7854 အမျိုးအစား- ရေစိုခံဗို့အား: 220V/380V ပါဝါ: 1.5kw အလေးချိန်: 300kg အတိုင်းအတာ(L*W*H): 1380*1200 *2000mm အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်: CE ISO အာမခံချက်- 1 Year After-sales Service Provided: အင်ဂျင်နီယာများ နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် စက်ယန္တရားများအတွက် ထုတ်ကုန်အမည်: သစ်သီးအခြောက်ခံစက် လျှောက်လွှာ: သစ်သီးများ စွမ်းဆောင်ရည်: 0.5-5t/h ပစ္စည်းများ: Stainless...
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ်အခြေအနေ- မူလနေရာအသစ်- ရှန်ဟိုင်း၊ တရုတ် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်- JUMPFRUITS မော်ဒယ်နံပါတ်- JPF-GG7854 အမျိုးအစား- ရေစိုခံဗို့အား- 220V/380V ပါဝါ- 1.5kw အလေးချိန်: 500kg အတိုင်းအတာ(L*W*H): 1560*450 *1340mm အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်- CE ISO အာမခံချက်- 1 Year After-sales Service Provided- အင်ဂျင်နီယာများ ပြည်ပတွင် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် စက်ယန္တရားများအတွက် ထုတ်ကုန်အမည်- သစ်သီးခြောက် ပြုပြင်ခြင်းလိုင်း ပစ္စည်းများ: Stainless Steel အမည်- apricot အခြောက်လှန်းသော mac...
အခြောက်လှန်းသော အသီးအနှံများ ထုတ်ယူခြင်း/ အခြောက်လှန်း Apricot ပြုလုပ်စက်
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ်အခြေအနေ- မူလနေရာအသစ်- ရှန်ဟိုင်း၊ တရုတ် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်- JUMPFRUITS မော်ဒယ်နံပါတ်- JPF-GG7854 အမျိုးအစား- ရေစိုခံဗို့အား- 220V/380V ပါဝါ- 1.5kw အလေးချိန်: 500kg အတိုင်းအတာ(L*W*H): 1560*450 *1340mm အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်- CE ISO အာမခံချက်- 1 နှစ် ပစ္စည်း- Stainless Steel လုပ်ဆောင်ချက်- ဘက်စုံသုံးအမည်- apricot အခြောက်လှန်းသည့်စက် စွမ်းဆောင်ရည်- 0.5-5t/h ပစ္စည်း- စက်မှုသစ်သီးများ ရေဓါတ်စုပ်ယူမှု စွမ်းရည် Supply Abili...
Turn Key ဖြေရှင်းချက်ဖြင့် အုန်းခြောက်အခြောက်ခံစက်ကို နေ့စွဲများ
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ်အခြေအနေ- မူလနေရာအသစ်- ရှန်ဟိုင်း၊ တရုတ် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်- JUMPFRUITS မော်ဒယ်နံပါတ်- JPF-YZL80 အမျိုးအစား- ရေစိုခံ ဗို့အား- 380V/50HZ ပါဝါ- 200kw အလေးချိန်- 15 တန် အတိုင်းအတာ(L*W*H): 40m*4m *5m Certification: ISO 9001 Warranty: 1 Year After-sales Service Provided: ပြည်ပတွင် ဝန်ဆောင်မှုပေးသော စက်ယန္တရားများအတွက် အင်ဂျင်နီယာများ ကုန်ပစ္စည်းအမည်- ထန်းစေ့ထုတ်စက် လျှောက်လွှာ: သရက်သီးခြောက်၊ စတော်ဘယ်ရီ၊ နာနတ်သီး၊ ဒူးရင်း၊ အနီရောင် d...
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ် သက်ဆိုင်သောစက်မှုလုပ်ငန်း- အာမခံပြီးနောက် ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံ- ဝန်ဆောင်မှု- ဗီဒီယို နည်းပညာဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှု ဗီဒီယို အထွက်-စစ်ဆေးရေး- ပံ့ပိုးထားသော စက်ယန္တရားစမ်းသပ်မှု အစီရင်ခံစာ- ပံ့ပိုးထားသော စျေးကွက်ရှာဖွေရေး အမျိုးအစား- ထုတ်ကုန်အသစ် 2020 အာမခံချက်- 1 နှစ် ပင်မအစိတ်အပိုင်းများ- မော်တော်အခြေအနေ- မူလနေရာအသစ်- Shanghai, China အမှတ်တံဆိပ်အမည်- JUMPFRUITS ဗို့အား- 380V/50HZ ပါဝါ- 300kw အလေးချိန်- 20 တန် Dimension(L*W*H): 50m*4m*5m အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်...
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ်အခြေအနေ- မူလနေရာအသစ်- ရှန်ဟိုင်း၊ တရုတ် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်- JUMPFRUITS မော်ဒယ်နံပါတ်- JPF-FPL0025 အမျိုးအစား- အစားအသောက်ပြင်ဆင်ခြင်း စက်ယန္တရား ဗို့အား: 380V/50HZ ပါဝါ: 30 kw အလေးချိန်: 20 တန် အတိုင်းအတာ(L*W*H) : 2100*1460*1590mm Certification: CE ISO Warranty: 1 Year After-sales Service Provided: အင်ဂျင်နီယာများ နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် ဝန်ဆောင်မှုပေးသော စက်ယန္တရားများ ရရှိနိုင်သော ကုန်ပစ္စည်းအမည်- စက်မှုအစားအစာ ပရိုဆက်ဆာ လျှောက်လွှာ: စက်မှုအစားအစာ လုပ်ငန်းစဉ်...
သစ်သီး ဟင်းသီးဟင်းရွက် Brush အခြောက်ခံစက်
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ် ကုန်ကြမ်း- ပြောင်း၊ သစ်သီး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ အခွံမာသီး၊ ပဲပုပ် သက်ဆိုင်သောစက်မှုလုပ်ငန်း- အာမခံပြီးနောက် စက်ရုံထုတ်လုပ်ရေး ဝန်ဆောင်မှု- ဗီဒီယိုနည်းပညာပံ့ပိုးမှု ဒေသဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုတည်နေရာ- ပြခန်းမရှိ တည်နေရာ- မရှိ ဗီဒီယိုအထွက်-စစ်ဆေးခြင်း- ပံ့ပိုးထားသော စက်ယန္တရားစစ်ဆေးမှု အစီရင်ခံစာ- ပံ့ပိုးထားသော စျေးကွက်ရှာဖွေရေး အမျိုးအစား- ထုတ်ကုန်အသစ် 2020 အာမခံချက် core အစိတ်အပိုင်းများ : 1 နှစ် ပင်မ အစိတ်အပိုင်းများ : မော်တာ မော်ဒယ်နံပါတ် : JUMP-FQJL အမှတ်တံဆိပ်အမည် : OEM မူရင်းနေရာ : ရှမ်း...
အစားအစာထုတ်လုပ်မှုလိုင်း ထုပ်ပိုးခြင်းအတွက် အဆင်သင့် အစားအစာ သန့်ရှင်းရေးနှင့် အခြောက်ခံခြင်း လိုင်းကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သော စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Tinplate Washer လုပ်နိုင်သည်
စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သော စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Tinplate စည်သွပ်ဘူး အစားအစာ သန့်စင်ခြင်းနှင့် အခြောက်ခံခြင်း လိုင်းအတွက် အစားအစာ ထုတ်လုပ်ရေးလိုင်း Can Washer ထုတ်ကုန် ဖော်ပြချက် ဗို့အား 380V, 50Hz ပါဝါ 5.15kw ကွန်ဗယ်ယာကြိုး 304 သံမဏိ ကြိုးကွက် ကြိုးပတ် Conveyor belt အကျယ် 800mm Water capacity 1.5m³ ပထမအကြိမ် အကြိမ်ရေ ပြောင်းလဲနိုင်သော အကြိမ်ရေ ချိန်ညှိနိုင်သော လုပ်ငန်းစဉ် -အဆင့်ရေပူသန့်စင်ခြင်း (သန့်စင်ဆေးထည့်နိုင်သည်) → ဒုတိယအဆင့် သန့်ရှင်းသောရေကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း → လေအခြောက်ခံခြင်း အကျဉ်းချုပ် စက်ပစ္စည်းဟော့ဝပ်မိတ်ဆက်...